प्रश्नैप्रश्न बोकेर फर्किए प्रधानमन्त्री देउवा | शुभयुग
प्रश्नैप्रश्न बोकेर फर्किए प्रधानमन्त्री देउवा
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ चैत्र २१, सोमबार (१ महिना अघि)
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् ।
शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका देउवाको आइतबारको समय भने पूजापाठमै बित्यो । प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार बिहान उत्तर प्रदेशको बनारस पुगेका थिए । एयर इन्डियाको जहाजमार्फत बनारस पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यहाँ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गरेका थिए । बनारसमा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि गरेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँका मन्दिरहरूमा दर्शन र पूजापाठ गरेका थिए । उनले बनारसमा नेपाली धर्मशालाको अवलोकन पनि गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण अत्यन्त सफल र फलदायी रहेको दावी गरेका छन् । तर, देउवाको भारत भ्रमण आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन । कूटनीतिक मर्यादाको हिसाबले यात्रामा निस्कनुअघि उनले देशभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको र सुझाव नलिएको भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ । छलफल त के, प्रधानमन्त्री भारत जाने विषयमा आपूmहरूलाई औपचारिक जानकारीसम्म नगराइएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धनमा समेत भारत भ्रमणको विषयमा छलफल नगरेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण अचानकै जुरेजस्तो देखिन पुगेको छ ।
यस्तो अन्योलबीच पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण औपचारिकताबाहेक खासै उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । नेपालले ०७७ साल जेठमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर संशोधित चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच उच्चस्तरको संवाद ठप्प भएको थियो । नेपाली भूमि भारतले कब्जामा राखेको र नेपालले पनि आफ्नो नक्सा संशोधन गरेका कारणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय सम्बन्ध ठप्प बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस विषयमा संवाद भयो वा भएन भन्ने केही खुलाइएको छैन ।
नेपालले नक्सा संशोधन गरेर संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गरेका आधारमा भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । किनभने त्यो भूमि झन्डै सात दशकदेखि भारतको कब्जामा छ र उसले आफ्नै भूमि हो भनेर दाबी पनि गरेको छ । नक्सा संशोधन भएको करिब १३ महिनापछि र देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कसरी फिर्ता ल्याउँछौ, भारतसँग कहिले कुरा गर्छौ ? भनेर प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै आएका छन् । देउवाले यसको जवाफ कसरी देलान्, त्यो पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीस्तरमा भेट र लामो समयदेखि अवरुद्ध संवाद सुचारु हुनुलाई नै कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारतयात्राको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानबारे नेपालले कुरा उठाए पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक वार्तापछि हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले सीमा विवादबारे कुरा भएको बताएका थिए । तर, यस विषयमा भारतले के प्रतिक्रिया दियो भन्ने बारेमा भने उनले केही खुलाएनन् । बरु उल्टै नेपालमा सीमा विवादबारे राजनीतिकरण हुने गरेको भन्ने भारतको गुनासो लिएर देउवा स्वदेश फर्किनु परेको कूटनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ओलीले चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवादबारे संवाद सुरु गरेकोमा र हिउँ पगालेर सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास गरेकोमा चिन्ता प्रकट गरेको देखियो । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) फर्केर आएपछि सोध्नुपर्ला, चुनावको मुखमा किन भारत गएको भनेर ?’ आइतबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्को राष्ट्रिय सम्मेलनमा ओलीले प्रश्न गरे, ‘चुच्चे नक्सा दूतावासमा झुण्डाएर फर्कनुभयो कि भएन ?’ साढे दुई दशकअघिदेखि अल्झेको पञ्चेश्वर परियोजना र नेपालमा जलविद्युत् विकासबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफल भने दुवै देशका लागि कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता छलफल पटकपटक भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा पुगेर अवरोध हुँदै आएको छ ।
देउवाको भारत यात्रामा भएका अन्य चार वटा समझदारी र सम्झौता सीमापार रेलसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसनबीच विज्ञता आदानप्रदान, इन्टरनेसनल सोलार एलाइन्समा नेपालको प्रवेशसलगायतका विषय नयाँं नभएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । यी सम्झौता निरन्तरता मात्र भएको कूटनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण गरिएको छ । भारत भ्रमणको विषयमा देशभित्र अनेक प्रश्न उठेका छन् । इपिजी प्रतिवेदन र भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर एक जना नेपाली युवक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाका विषयमा देउवा मौन रहनुको कारण पनि उनको आलोचना भएको छ । देउवाले भारतको विपक्षी दलका नेतालाई किन भेटेनन् ? किन सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सिधै गए ? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि यतिबेला धेरैको चासोको विषय बनेको छ । भारतसँगको मुख्य समस्या भनेकै समझदारी र सम्झौता हुनु तर, निर्धारित समयमा कार्यान्वयन नहुनु हो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा कार्यान्वयनको दिशामा कति उपलव्धि हासिल गर्नेछन्, विगतमा भएको सहमति र सम्झौतामा भारतलाई कति कन्भिन्स गरे, त्यो विषय पनि मौन रहेको छ ।
स्वदेश फर्किए प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । देउवा भारतको नयाँ दिल्लीबाट नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानमार्फत काठमाडौं आइपुगेका हुन् । गत असारमा प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवा शुक्रबार पहिलोपटक छिमेकी भारतको भ्रमणमा गएका थिए । शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दुई पक्षीय वार्ता भएको थियो । वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवादको समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर बनारस पुगेका थिए । बनारसमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मन्दिरमा पूजाआजा गर्नुका साथै नेपाल सरकारले बनाउन लागेको वृद्धाश्रमको शिलान्यास पनि गरे । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले जनकुपुर–जयनगर रेल सेवाको भर्चुअली उद्घाटन पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोली ५० सदस्यीय रहेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यबहाक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाण, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित नेपाल सरकार उच्चपदस्थ कर्मचारीले स्वागत गरे । नेपाली सेनाले उनलाई सलामी अर्पण गरेको थियो ।
‘सभापतिका रूपमा भाजपा मुख्यालय’
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यहाँको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मुख्लालयमा गएको विषयलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । खासगरी भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको विपक्षी दलसँग भेटवार्ता नगरेको तर, भाजपाको मुख्यालय गएको विषयले कूटनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणको पहिलो दिन शुक्रबार नै भाजपाको मुख्यालयको भ्रमण गरेका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले भने प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा मात्र भाजपाको मुख्यालयमा गएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भाजपाको मुख्यालयमा भ्रमण गरेको चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टी सभापतिको हैसियतमा उनले उक्त भ्रमण गरेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीमा दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन मुख्यालयमै गएर भेट गरेको र त्यसलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भन्न नमिल्ने बताए ।